#Qarreen Awwadaay mormii cimaa guyyaa hardhaa gaggeessaa jiran kana fakkaata! – Kichuu
HomeAfaan OromooNews#Qarreen Awwadaay mormii cimaa guyyaa hardhaa gaggeessaa jiran kana fakkaata!
#Qarreen Awwadaay mormii cimaa guyyaa hardhaa gaggeessaa jiran kana fakkaata! Abiy ahmed hudhamee jira. Awwadaayitti sagaleen #Abiymuatgo jettu dhageessifamaa jirti!
የአወዳይ ቀሬዎች ከወደ ሀረርጌ አምባገነኑን የአብይ መንግስት ከስልጣን እንድወርድ ካለምንም ፍርሃት (#Abiy_Must_Go) በማለት፣ የተቃውሞ ሰልፍ እያደረጉ ነው።
በአሁኑ ሳዓት በምስራቅ ሀረርጌ በአወዳይ ከተማ ውስጥ ሴቶች ብቻ የተሳተፉበት የተቃውሞ ሰልፍ እየተደረገ ነው።
#AWADAAY Hiriiraa BALAALEFANNAA bulchiinsa nafxanyaa, sirna haacaaluu hundeessaa ajjeesee jawaar mohammad, abdii raggaasaa, mika’el booran, fa’a hidhu nu oromoo cuufaafuu hin ta’u, ABIY AHMED nurraa bu’uu qaba, jechuun dubartoonnii deessuu gootootaa sagalee ofii dhageesiisaa jiru.
Guutuu oromiyaattii itti fufa…. Harmeef obbeeliiwwan koo awalwadaay galannii keessan bilisuummaa hawwitan san haa ta’u.
Jajjabaadhaa dhiiga oromootin dhufe waan oromoof hin tolle hallayyaa ni busna.
Qabsaawa Imaanaa Hassan kaniini dhalatee Godina Wallagga Baha Aanaa Nuunnuu Qumbaa ganda Hawwi beekumsaa jedhamutti yeroo ta’u miseensa WBO warra karra nagaan Eritrea irra galani polisi oromiyaatti dabalaman jedhama keessa ture .
Hata’u malee sirni Mootummaa Abiyi Ahmed WBO bosona jiran walin hariiro qabdaa jechuin erga waggaa tokkooofoliif mana hidhaa Ciroo keessatti daraaraa turaniin booda gaafa 28/08/2020 mana hidhaa keessatti ajjeesani bishaan keessatti gatan.
Waan Garbaa nama gubu.
Qabsoo Biyyaa fi Biyya Alaa keessatti bu’aalee argaman